Fahalalana resin fifanakalozana cation
Ny resina cation-exchange resins dia ampiasaina amin'ny fitsaboana hyperkalaemia amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fahaverezan'ny potasioma amin'ny alàlan'ny tsinay, indrindra eo amin'ny sehatry ny famoahana urin ratsy na alohan'ny dialysezy (ny fomba mahomby indrindra amin'ny fitsaboana hyperkalaemia). Ny resins c ...
Inona ny famerenan'ny resina IX? Mandritra ny tsingerin'ny serivisy iray na maromaro dia ho reraka ny resina IX, midika izany fa tsy afaka manamora ny fihetsiky ny fifanakalozana ion intsony izy. Mitranga izany raha toa ka mihatra amin'ny tranokala mavitrika azo zahana ao amin'ny res ...
Resaka fifanakalozana cation: fahalalana resin fifanakalozana
Ity fisafidianana resin ny fifanakalozana ion ity dia misy ifandraisany amin'ireto zavatra manaraka ireto: 1. Arakaraka ny maha-be ny fiampangana ny tarika ion dia mora kokoa ny hamoronan'io resin ny fifanakalozana anion io. Ohatra, ny ion divalent dia mora voadidy kokoa noho ny ion monovaly. 2. Ho an'ireo ion miaraka amin'ny habetsahan'ny fiampangana azy, ny i ...
Ny resin'ny fifanakalozana Anion sy cation dia manana rafitra mitombina. Niniana natao tambajotra, rafitra telo-habe. Misy polymère mifanaraka amin'izany, izay mety asidra na hady. Amin'ny alàlan'ny fanatanterahana polymerization mifanaraka amin'izany ihany no ahafahan'ny produ ...
Amin'ny dingan'ny fampiasana ny resina dia tokony hialana ny fandotoana ny zavatra mihantona, ny zavatra biolojika ary ny solika, ary ny fisorohana mafy ny rano maloto sasany amin'ny resina dia tokony hialana. Noho izany dia tokony hesorina ny ionan'ny vy mavesatra alohan'ny hidiran'ny rano maloto asidra asidra ao amin'ny resina anion hisorohana ny cataly ...